“Abaal nin galaa badan, nin gudaase yar”…
Suxufi madax bannaan, Garoowe, Puntland/Soomaaliya
Email: cmwacays@yahoo.com ama wacays2001@hotmail.com
Qoraaga Maqaalka: Cabdulqaadir M. Wacays
“Halkani waa Raadiyaha Gaalkacyo, Puntland….this is Radio Galkayo, Puntland” ayaan maqlay goor barqo ah abbaarihii 8:00dii barqannimo anigoo sii gelaya dukaan yar oo lagu iibiyo dharka iyo cadarka, islamarkaana ay bunka ka cabbaan inta badan dhallinyarada reer Gaalkacyo kuwooda bun-cabka ah. Codka aan maqlay wuxuu ahaa cod qof ajnabi ah oo kasoo baxayey raadiyow yar oo uu gacanta ku haystay wiil dhallinyaro ah oo dhex fadhiyey sandaqad yar oo aan ka fogeyn dukaankaas. Waan qoslay, waayo waxaan gartay codka qofkaas ajnabiga ah ee xiriirinaya idaacadda….wuxuu ahaa qof si talantaalli ah u adeegsanayey afafka Soomaaliga iyo Ingiriisiga…haa …waan gartay…wuxuu ahaa nin aan aad isu naqaannay, hase yeeshee ay isugu keen dambeysay siddeed sano ka-hor….wuxuu ahaa codkii Sam Voron..
Maalintaas waxay aniga ii ahayd maalin farxadeed, waayo qorshaha joogitaankayga Gaalkacyo waxaa ka mid ahaa in aan wax ka qoro sooyaalka taariikheed ee raadiyaha Gaalkacyo. Joogitaanka uu Sam Voron joogay Gaalkacyo waxay iigu muuqatay fursad qaali ah oo aan xog sugan ku heli karey. Sidaas daraadeed, waxaan durba goostay in aan salaan iyo xog-wareysi ugu tago Sam Voron. Waxaan dabadeed si deg deg ah u dalbaday bunkii aan soo doontay.
Sam Voron oo dhex fadhiya raadiyaha Gaalkacyo
Hilow iyo xiiso badan oo aan u qabay la-kulanka Sam Voron dartiis, waxaa ila dheeraatay muddadii yareyd ee uu dalabku iga maqnaa, markiise la ii keenay, intaan si fudud uga laacay baan abbaaray xarunta raadiyaha Gaalkacyo. Ilaaladii joogtay albaabka hore ee dhismaha raadiyaha oo aan si fiican isu naqaannay ayaa si xushmad leh iigu sheegay in Sam Voron uusan xilligaas joogin, iyagoo intaas iigu daray inuu goor dhow aaday hoteelka uu deggan yahay oo sida ay ii sheegeen dhabarka ku hayey dhismaha idaacadda. Markaan galay hoteelkii la ii tilmaamay baan durba gadaashayda ka maqlay “ Hi Wa’ays….Haye Wacays...”..Wuxuu ahaa Sam Voron…ninkii aan raadinayey…bud-dhigihii raadiyaha Gaalkacyo…
Barxad yar oo ku dhex taallay isla hoteelka ayaan aniga iyo Sam Voron dhigannay laba kursi, waxaanan dalbannay cabitaan qabow. Is-nabdaadin iyo is-wareysi gaaban kaddib, waxaan Sam Voron uga warramay ujeeddada socodkayga, waxaanan ka codsaday inuu iiga warramo sooyaalka taariikheed ee raadiyaha Gaalkacyo, gaar ahaan qaabkii ay isaga ugu abuurantay iyo cidda ku dhalisay dhidbidda raadiyaha Gaalkacyo. Waxaan dabadeed wareysi kaas la mid ah ugu tagey Cabdikariin Nuur Maxamuud “Cirfe” oo ahaa maskaxdii ka dambeysay abuurmidda raadiyaha Gaalkacyo. Nasiib wanaag, Cabdikariin qudhiisa wuxuu xilligaas ku sugnaa magaalada Gaalkacyo.
MAALMIHII UGU HORREEYEY…
Kaddib qaran-jabkii Soomaaliya, waxaa dalka ka billowday dagaal sokeeye oo saameeyey guud ahaan dhinacyada kala duwan ee nolosha ummadda Soomaaliyeed. Inkastoo ay dagaalladaasi ku koobnaayeen qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya, misana hay’adaha warbaahinta caalamiga ah, oo xilligaas si joogto ah u baahinayey xasuuqii, boobkii, iyo gumaadkii ka socday dalka, waxay Soomaaliya ka bixinayeen sawirro si qaldan loo xardhay oo muujinayey in dalka Soomaaliya oo dhan uu dabku ka hurayo, aysanna jirin xitaa tuulo yar oo ka badbaadday aafadii dagaalka sokeeye. Dhambaalladii ay warbaahinta caalamiga ahi tabinayeen waxay kaloo muujinayeen in dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay birta is wada saareen, dhiigguna uu qulqulayo dariiqyada dalka oo dhan.
Wararkaas naxdinta lahaa ee ay warbaahinta caalamiga ahi sida joogtada ah uga soo dirayeen Soomaaliya, waxay saamaynta ugu ballaaran ku yeesheen Soomaalidii qurba-joogga ahayd oo wararkaas ka qaaday jaha-wareer, welwel, iyo uur-ku-taallo, islamarkaana waayey ilo kale oo dhab-ka-hadal ah oo ay kala socdaan ayaandarradii ku habsatay dalkoodii hooyo.
Cabdikariin Nuur Maxamuud “Cirfe”, oo xilligaas degganaa dalka Australia, gaar ahaan magaalada Melbourne oo uu ka baran jirey cilmiga electronics-ka, islamarkaana xiriir joogteysan la lahaa Soomaaliya, ayaa ka mid ahaa qurba-jooggii Soomaaliyeed ee sida weyn uga qiirooday wararkaas aan isu dheellitirnayn ee ay warbaahinta caalamiga ahi sida joogtada ah uga soo sheegayeen Soomaaliya. Cabdikariin waxaa yaab iyo amankaag ku noqday sababta warbaahinta caalamiga ahi ay mar kasta isaga indha-tirayeen in ay jiraan dadyow iyo gobollo Soomaaliyeed oo ka badbaaday dagaallada sokeeye. Gobollada ka badbaaday dagaallada sokeeye ee uu Cabdikariin madaxa ku hayey waxaa ka mid ahaa gobolladii laysku oran jirey Waqooyi-bari Soomaaliya, haatanse la baxay Puntland. Cabdikariin Nuur wuxuu aaminsanaa in waxa keliya oo ay gobolladaas u baahnaayeen ay ahayd in lagu dhiirrigeliyo, laguna taageero sidii ay ugu fara-adaygi lahaayeen nabadda iyo xasilloonida ka jirtey deegaannadooda.
Bartamihii sanadkii 1992kii, Cabdikariin Nuur Maxamuud “cirfe”, isagoo ka duulaya fikirka ah in baahi weyn oo deg deg ah loo qabo adkaynta nabaddii ka jirtey gobollada Waqooyi-bari Soomaaliya, iyo in ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba la dareensiiyo in ay jiraan dadyow nabadda jecel iyo deegaanno xasilloon, wuxuu is tusay in sida keliya ee baahidaas loo dabooli karo ay tahay in la helo Raadiyow madax bannaan oo laga dhiso gobollada Waqooyi-bari Soomaaliya.
Cabdikariin Nuur wuxuu islamarkiiba u hawl galay hirgalinta fikirkaas, wuxuuna dadaalkiisa ku billaabay sahan la xiriira qalabka idaacadaha iyo qiimeyntooda, iyo in uu la xiriiro shaqsiyaad uu ku tuhmayey in ay talooyin muhiim ah ku biirin karayeen hindisihiisa cusub.
Isla bartamihii sanadkii 1992kii, shaqsiyaadkii uu Cabdikariin Nuur la xiriiray isagoo xog iyo talo-doon ah waxaa ugu horreeyey Maxamed Abshir Waldo oo degganaa magaalada Nayroobi ee dalka Kiinya, islamarkaana ahaa wakiilka Nayroobi ee guddigii la oran jirey Relief and Rehabilitation Commision (RRC) oo jabhaddii SSDF u qaabilsanaa xiriirinta iyo fududeynta hawlihii ay hay’adaha caalamiga ah ee samafalku ka wadeen gobollada Waqooyi-bari Soomaaliya. Cabdikariin wuxuu Waldo kala kulmay soo dhoweyn, dhiirrigelin iyo ballanqaaad ah inuu intii karaankiisa ah la garabgeli doono hirgalinta hindisahaas isaga ah, wuxuuna ku adkeeyey in uusan ka harin kana caajisin ka-mira-dhalinta hawshaas.
Dhiirrigalintii Maxamed Abshir Waldo kaddib, wuxuu Cabdikariin sii kordhiyey xawaarihii uu ku socday sahankii uu ugu jirey helitaanka qalab idaacadeed. Dabayaaqadii Bishii Nofembar sanadkii 1992kii, maalin maalmaha ka mid ah, Cabdikariin oo daawanaya dukaan lagu iibiyo qalabka electronics-ka oo ku yaalla magaalada Melbourne, laguna magacaabo “Dick Smith electronics”, waxaa u yimid ninkii dukaanka iibinayey, wuxuuna ku yiri “sidee kuu caawiyaa?..”.
Cabdikariin wuxuu ugu jawaabay “ waad mahadsan tahay, qalabkan baan daawanayey, hase ahaatee waxaan raadinayey qalab idaacadeed iyo meel aan ka heli karo…haddaad iga caawiso waan kaaga mahadcelin lahaa…”.
Ninkii dukaanka iibinayey wuxuu Cabdikariin weydiiyey dalka uu ka yimid, wuxuuna u sheegay inuu ka yimid Soomaaliya, dabadeedna ninkii intuu hal cabbaar ah aamusay buu ku warceliyey “ Haa…haa…Soomaaliya sow maaha dalka ay haatan dagaalladu ka socdaan...,”, wuxuuna intaas raaciyey “ waxaa jira nin la yiraahdo Sam Voron oo deggan magaalada Sydney..ninkaas waa nin caawiya goobaha ay ka jiraan dhibaatooyinka aadaminimo…wuxuu ku caawiyaa qalab idaacadeed iyo weliba aqoontiisa farsamo ee dhismaha idaacadaha…Soomaaliya xitaa wuu hadal hayey….fadlan ninkaas la xiriir…”.
Wada-sheekeysigaas gaaban kaddib, ninkii dukaanka iibinayey wuxuu Cabdikariin u qoray cinwaannada uu kala xiriiri karey Sam Voron, isagoo islamarkaana ka qortay magaciisa iyo cinwaannadiisa.
Cabdikariin Nuur oo ay maalintaas u ahayd maalin farxadeed, wuxuu islamarkii uu gurigiisii tagey talefoon u diray Sam Voron. Nasiib wanaag, waxaa la hadlay isla ninkii uu raadinayey ee ahaa Sam Voron oo ku yiri “ ma Cabdi baa? ”, taasoo Cabdikariin u muujisay in dukaanlihii uu durba soo wargeliyey Sam Voron. Is-nabdaadin iyo is-barasho gaaban kaddib, Cabdikariin wuxuu si kooban Sam Voron ugaga warramay sababtii uu usoo wacay, wuxuuna warbixin kooban ka siiyey dalka Soomaaliya iyo xaaladda uu ku sugan yahay. Ugu dambeyntii, Cabdikariin iyo Sam Voron waxay ku heshiiyeen in ay iska warqabaan, xiriirkoodana joogteeyaan.
Maalintaas wixii ka dambeeyey, Cabdikariin Nuur wuxuu xiriir joogteysan oo xagga talefoonka ah la samaynayey Sam Voron oo ay kala joogeen laba magaalo oo aad u kala fog (Sydney iyo Melbourne). Muddo shan bilood ah toddobaadkiiba mar ama laba jeer bay Cabdikariin iyo Sam Voron ku wada hadli jireen talefoonka. Cabdikariin wuxuu Sam Voron uga warrami jirey qaranjabkii ku dhacay Soomaaliya, burburkii asiibay dowladdii jirtey, xaaladda colaadeed ee taagan, iyo sida ay u burbureen dhammaan hay’adihii adeeg-bixinta ee dowliga ahaa iyo kuwii gaarka loo lahaa. Wuxuu kaloo u sharxi jirey baahida weyn ee loo qabo in Soomaaliya, gaar ahaan deegaannada xasilloon sida gobollada Waqooyi-bari, la geeyo Raadiyow madaxbannaan oo gacan ka geysta baadigoobkii billowga ahaa ee ay ummadda Soomaaliyeed ugu jirtay dib-u-heshiin iyo nabad dib uga dhalata Soomaaliya. Cabdikariin wuxuu si joogto ah Sam Voron ugu gudbin jiray qoraallo fara badan oo afafka ingiriisiga iyo Soomaaligaba ku qoran, kuwaasoo ka hadlayey xaaladda nololeed, nabadgelyo, iyo dhaqaale ee gobollada Waqooyi-bari Soomaaliya.
Mr. Sam Voron oo ah farsamayaqaan ay xirfaddiisu tahay farsamada xagga raadiyayaasha iyo dhismaha idaacadaha, wuxuu sanadkii 1991kii caawiyey bulsho dhibaateysan oo ku noolayd jasiiradda Bougaineville oo ay xilligaas ka jirtey xaalad colaadeed oo la mid ahayd xaaladda Soomaaliya. Jasiiradda Bougaineville waxay ka mid tahay dalka Papua New Guinea oo dhanka Bari deris kala ah dalweynaha Australia. Jasiiraddan waxaa muddo 10 sano ah ka socday dagaal sokeeye oo sababay burbur naf iyo maalba leh. Sam Voron wuxuu reer Bougaineville ugu deeqay qalab idaacadeed oo suurtagaliyey in halkaas laga dhidbo Raadiyow la magac baxay “Raadiyaha xorta ah ee Bougaineville”, kaasoo siyaabo kala duwan u caawiyey reer Bougaineville.
Sidaas awgeed, maadaama Sam Voron uu horay usoo caawiyey deegaanno kale oo ay ragaadiyeen mid la mid ah xaaladdii murugsanayd ee ka aloosnayd Soomaaliya, waxay taasi u sahashay in uu si fudud u fahmo islamarkaana uu u rumaysto wararkii naxdinta lahaa ee uu Cabdikariin talefoonka ugu sheegayey muddo shan bilood ah iyagoo aan xitaa mar keliya is arag. Ugu dambayntii, Sam Voron wuxuu Cabdikariin u ballan qaaday in intii karaankiisa ah uu u hawlgeli doono teegeero-u-raadinta hindisihiisa cusub.
Muddo shan bilood ah buu Cabdikariin Jawaab ka dhowrayey Sam Voron. Nasiibdarro, albaab kasta oo uu Sam Voron gargaraacayba waa uu kusoo oodmay, waxayna mar kasta jawaabta la siinayey ahayd “ Maya…maya…Soomaaliya waa dal waalan ee naga daa..”
Sam Voron, markuu ka quustay mira-dhalka taageeradii uu u raadinayey hindisihii Cabdikariin, iyadoo islamarkaana maalinba maalinta ka dambeysa ay sii kordhaysay danaynta iyo muhimadda uu siinayey hindisahan, wuxuu ugu dambayntii iskiis u go’aansaday inuu jeebkiisa ku tashado. Sam Voron wuxuu xilligaas gacanta ku hayey hal war-laliye oo keliya, wuxuuna jeebkiisa ka iibiyey qalabkii kale ee muhiimka u ahaa dhismaha raadiyow shaqayn kara. Intaas dabadeed, Sam Voron wuxuu goostay inuu Soomaaliya qalabkaas geeyo.
Maadaama Cabdikariin Nuur iyo Sam Voron ay kala degganaayeen laba magaalo (Sydney iyo Melbourne) oo isu jira 700km, waxay labadooduba ula muuqatay waqti-dhumis iyo kharash kaloo dheeraad ah in ay isugu yimaadaan mid ka mid ah magaalooyinkaas si ay halkaas isaga raacaan. Sidaas awgeed, waxay ku ballameen in ay isugu yimaadaan magaalada Singabuur ee dalka Singabuur, si ay halkaas uga sii ambaqaadaan socdaalkoodii ku jihaysnaa dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobolladii xilligaas la isku oran jirey Waqooyi-bari Soomaaliya, haatanse la baxay Puntland.
Jaaliyadda Waqooyi-bari Soomaaliya ee magaalada Melbourne ayaa qayb ka qaatay soo-ambabixinta Sam Voron iyo Cabdikariin Nuur, iyo qalabkii idaacadeed ee ay wadeen, waxayna bixiyeen tikidhka diyaaradda ee Cabdikariin iyo kharashka miisaanka qalabka, halka Sam Voron uu isagu iska bixiyey tikidhka diyaaradda. Shirkadda diyaaradaha ee Singabuur Airline ayaa iyaduna samaysay qiima-dhin xagga miisaanka qalabka ah maadaama qalabkaasi ahaa deeq samafal ah.
Sam Voron isagoo dhoollacadaynaya, kuna faraxsan guusha uu kasoo hooyey isku-daygiisii aadaminimo, kaasoo la oran karo wuxuu ahaa “jar-iska-tuur”, ayaa ugu yiri “ Weligey noloshayda ma aanan arag qof Soomaali ah…..Cabdikariin Nuur xitaa waxaan ku kulannay magaalada Singabuur, wuxuuna ahaa qofkii ugu horreeyey oo Soomaali ah oo aan noloshayda la kulmo amaba aan arko..”.
Cabdikariin Nuur oo isaguna dhankiisa iiga warramayey qaabkii uu u dhacay is-araggoodii ugu horreeyey ee garoonka diyaaradaha Singabuur ayaa igu yiri: 7dii Luulyo 1993kii baan aniga iyo Sam Voron kasoo kala dhoofnay magaalooyinka Sydney iyo Melbourne, waxayna ballantayadu ahayd in aan ku kulanno garoonka diyaaraha Singabuur. Maadaama aniga iyo isaga aynaan horay isu arag, waxaan samaysannay baaq aan isku afgaranno. Waxaan Sam Voron u sheegay in aan ahay nin Soomaali ah oo dhererkiisu yahay meel dhexaad, islamarkaana aan soo xiran doono surwaal iyo jaakad midabkoodu yahay midabka dambaska, isaguna wuxuu igu yiri, aniguna surwaal madow oo jiinis ah iyo koofiyad baan soo xiran doonaa. Waxaan kaloon ku heshiinnay in labadeennuba aan madaxa gacanta saaranno si aan isu aqoonsanno. Anigu nus saac baan Sam Voron garoonka uga soo horreeyey, waxayna ahayd ballantu in aan ku kulanno goobta boorsooyinka laga qaato. Anigoo boorsooyinkaygii urursaday islamarkaana dul taagan bay timid diyaaraddii uu Sam Voron la socday, waxaana durba ii muuqday Sam Voron oo madaxa gacanta ku haya. Waan gartay in ninkaasi yahay Sam Voron, markaas baannu is niri “ ma tahay Sam iyo adiguna ma tahay Cabdi…?..
Cabdikariin iyo Sam Voron waxay dabadeed u gudbeen faras-magaalaha Singabuur, halkaasoo uu Sam Voron kasoo iibiyey qalab kaloo dheeraad ah oo uu u baahnaa raadiyowga cusub ee la dhisi doono. Muddo habeen iyo maalin ah bay magaalada Singabuur joogeen, dabadeedna waxay usoo gudbeen magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta oo ay yimaadeen 9kii Luulyo, 1993kii, halkaasoo ay iyana joogeen 10kii iyo 11kii isla bishaas, waxayna magaalada Boosaaso kasoo degeen 12kii luulyo, 1993.
Labadii maalmood ee ay Sam iyo Cabdikariin joogeen Dubai, waxaa si diirran usoo dhoweeyey jaaliyadda Waqooyi-bari Soomaaliya. Shirkadda Daallo Airline oo waayadaas ahayd shirkadda keliya ee gobollada Waqooyi-bari ka shaqayn jirtey ayaa gacan weyn ka geysatay safarkoodii Boosaaso. Dadaal ballaaran oo ay sameeyeen jaaliyadda Waqooyi-bari ee Dubai ayaa suurtagaliyey in Daalo Airlines ay u samayso qiimo-dhimis xagga tikidhada ah, iyo in ay lacag la’aan ugu qaaddo qalabkii ay wateen.
SOCDAALKII GOBOLLADA WAQOOYI-BARI SOOMAALIYA…
12kii Luulyo sanadkii 1993kii bay Cabdikariin Nuur Maxamuud iyo Sam Voron waxay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. Jabhadda SSDF ayaa xilligaas gacanta ku haysay gobollada Waqooyi-bari Soomaaliya. Tan iyo billowgii dagaalladii sokeeye, magaalada Boosaaso ayaa ahayd xarunta siyaasadda iyo ganacsigaba, halka magaalada Gaalkacyo ay ka ahayd goob colaadeed oo ay ku hardamayeen ciidamada SSDF iyo kuwii jabhaddii USC. Hase yeeshee, nasiib wanaag, imaatinka Cabdikariin iyo Sam Voron waxay kusoo beegantay iyadoo muddo bil ah ka-hor ay jabhadahaas iyo jabhaddii SNDU kala saxiixdeen heshiis nabadeed, kaasoo uu biyo-dhiciisu ahaa in beelihii soomaaliyeed ee deegaankaas ku wada noolaan jiray ay nabad kusoo wada degaan magaalada Gaalkacyo.
Cabdikariin iyo Sam Voron waxay degeen hoteelkii la oran jiray “Gacayte” oo xilligaas ahaa hoteelka ugu wanaagsan magaalada Boosaaso, waxayna islamarkiiba la gataati-dheceen daal fara badan. Sidaas daraadeed, Cabdikariin iyo Sam Voron maalintaas wax hawl ah ma aysan qabin, hase yeeshee subaxnimadii dambe waxaa hoteelka ugu yimid rag maqlay imaatinkooda iyo hawsha ay u socdeen, waxaana raggaas ka mid ahaa Md. Jaamac Cali Jaamac oo xilligaas ahaa ku-simaha guddoomiyaha jabhadda SSDF, iyo Md. Cabdullaahi Boqor Muuse oo isaguna ka mid ahaa madaxda sare ee isla jabhaddaas. Cabdikariin iyo Sam Voron waxay labadaas mas’uul uga warrameen hawshii ay u socdeen, waxayna intaas u raaciyeen in ay u baahan yihiin gaadiid ay ku sahmiyaan goobta ugu habboon ee laga dhisi karo idaacad madax bannaan. Sida uu Cabdikariin ii sheegay, labadan mas’uul si fiican bay u soo dhoweeyeen, islamarkaana uga dhagaysteen warbixintii ay siiyeen, hase yeeshee dib dambe uguma aysan soo noqon.
Sidoo kale, Cabdikariin iyo Sam Voron waxaa hoteelka ku soo booqday rag kale oo isugu jiray madax, dhallinyaro, iyo waxgaradba, waxaana ka mid ahaa madaxweynaha Dowlad-Goboleedka Puntland Md. Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo xillgaas ahaa guddoomiyaha Guddiga Xaaladda Degdegga ah ee jabhadda SSDF. Inkastoo uu muddo dheer maqli jiray magaciisa iyo warar isaga ku saabsan, misana Cabdikariin waxay u ahayd markii ugu horreysay noloshiisa ee uu arko Md. Cabdullaahi Yuusuf. Maadaama uu kulankaas ahaa kulan gaaban oo hordhac ah, Md Cabdullaahi Yuusuf wuxuu Cabdikariin iyo Sam Voron kula ballamay in maalintaas maalintii xigtay ay ugu yimaadaan guriga uu ka degganaa magaalada Boosaaso, si ay uga wada hadlaan qorshaha hawgalkooda iyo weliba tas-hiilaadka ay u baahan yihiin.
Cabdikariin iyo Sam Voron markey tageen guriga Md. Cabdullaahi Yuusuf maalintii lala ballamay, waxay la kulmeen soo-dhoweyn diirran iyo dareen farxadeed oo muujinayey sida ay madaxda jabhadda SSDF uga go’an tahay baritaaridda iyo garabgalka dadaal kasta oo ku wajahan horumarinta reer Waqooyi-bari Soomaaliya. Xog-warran dheer oo ku saabsan ujeeddada socodkooda iyo muhimadda ay yeelan karto idaacad madax bannaan oo laga dhidbo gobollada Waqooyi-bari Soomaaliya, Cabdikariin Nuur iyo Sam Voron waxay u sheegeen Md. Cabdullaaahi Yuusuf in dhaqaajinta hawlgalkooda uu u xanniban yahay gaadiid la’aan, si ay marka hore u dhamaystiraan wejigii koowaad ee hawlgalkooda oo ahaa sahminta goobta ugu habboon ee laga dhidbi karo raadiyow madax bannaan. Md. Cabdullaahi Yuusuf oo si weyn ugu riyaaqay dadaalka weyn ee ay sameeyeen Cabdikariin iyo Sam Voron, wuxuu u ballan qaaday in sida ugu dhaqsaha badan uu ugu diyaarin doono dhammaan tas-hiilaadka ay u baahan yihiin. Sida Cabdikariin iyo Sam Voron ii xaqiijiyeen, Md. Cabdullaahi Yuusuf waa uu ka dhabeeyey ballanqaadkaas.
Mar aan Cabdikariin iyo Sam Voron weydiiyey bal in ay jirtay goob ay madaxa kusii hayeen in raadiyowgan laga dhiso ka-hor intii aysan iman magaalada Boosaaso, waxay labaduba ii xaqiijiyeen in haba yaraatee aysan jirin goob si gaar ah ugu calaamadaysnayd oo ay madaxa ku hayeen. Sam Voron ayaa wuxuu intaas ii raaciyey in markey Boosaaso yimaadeen uu Cabdikariin dhowr jeer ku yiri “ Sam, adiga ayaa xulaya magaalada iyo goobta ku habboon in idaacadan laga dhiso.”.
Sam Voron iyo Cabdikariin Nuur waxay magaalada Boosaaso ka ambabaxeen 16kii Luulyo 1993kii, si ay halkaas uga sii ambaqaadaan hawlgalkoodii ku beegnaa sahminta magaalada iyo goobta ugu habboon ee laga dhisi karey raadiyow madaxbannaan. Shuruudaha gundhigga u ah sahankaas waxay ahaayeen kuwo farsamo, sidaas awgeed, hawsha xulidda waxaa si gaar ah ugu xilsaarnaa Sam Voron, halka Cabdikariin Nuur kaalintiisu ay ku koobnayd fududaynta iyo sahlidda habsami-u-socodka hawlgalkaas.
DHIDBIDDII RAADIYAHA GAALKACYO…
Cabdikariin iyo Sam Voron waxay soo gaareen magaalada Gaalkacyo 17kii Luulyo, 1993, kaddib markii ay soo mareen dhammaan degmooyinka waaweyn ee ku teedsan waddada dheer ee isku xirta Gaalkacyo iyo Boosaaso. Guddoomiyihii xilligaas ee gobolka Mudug, marxuum Cabdiraxmaan Cali Biixi, ayaa halkaas ugu soo dhoweeyey si aan qoraal iyo hadal midna lagu cabbiri karin, wuxuuna dejiyey hoy uu horay ugu sii diyaariyey, isagoo islamarkaana ku wareejiyey gaadiid ay ku shaqaystaan.
Sida ay ii sheegeen Cabdikariin Nuur iyo Sam Voron, marxuum Cabdiraxmaan Cali Biixi wuxuu ahaa nin si weyn u doonayey in magaalada Gaalkacyo ay ku guuleysato sahankii lagu xulayey magaalada iyo goobtii laga dhisi lahaa idaacadda cusub. Marxuum Biixi, isagoo maanka ku hayey marxaladdii adkayd ee uu ku sugnaa gobolka Mudug iyo baahida degdegga ah ee loo qabay idaacad madax bannaan oo gacan ka geysata xoojinta heshiiskii nabadda ee ay bil ka-hor kala qorteen beelihii Soomaaliyeed ee gobolkaas wada degi jiray, waxaa isaga ka go’nayd in uu qaado tallaabo kasta ee uu gobolkaas ku heli karey raadiyowgaas.
Imaatinka Sam Voron iyo Cabdikariin Nuur ee magaalada Gaalkacyo waxay ku soo beegantay iyadoo ay maalmahaas uun magaaladu kasoo kabanaysay burburkii kasoo gaaray dagaalladii sokeeye. Inkastoo qoysaskii magaalada horay uga qaxay ay si tartiib tartiib ah dib ugu soo gurya-noqonayeen magaalada Gaalkacyo, misana marna ma aysan jirin kalsooni dhab ah oo ay reer Gaalkacyoodku qabeen, sidaas awgeed, qoysas badan ayaan durba kusoo dhiirran in ay dib ugu soo laabtaan guryahoodii. Tusaale ahaan, horraantii bishii Ogoosto, sanadkii 1993kii, waxaa magaalada Gaalkacyo degganaa dad aad u tiro yar oo aan ka badnayn 300 oo qof.
Sam Voron isla maalintii uu yimid magaalada Gaalkacyo waxay indhihiisu qabteen goobtii ugu habboonayd gobollada Waqooyi Bari Soomaaliya oo raadiyow laga dhisi karey….waxay ahayd magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan gudaha saldhigga booliiska Gaalkacyo…waxaa halkaas ka dhisnaa siin (tower) uu dhererkiisu yahay 30m. Maadaama qalabka idaacaddu uu ahaa qalab kooban, waxaa lagama maarmaan ahayd in la helo tas-hiilaad kale oo xoojin kara masaafada iyo tayada war-laliyaha idaacadda. Guud ahaan gobollada Waqooyi-bari ma aysan jirin degmo lahayd siin (tower) uu dhererkiisu yahay 30m.
Sam voron oo ahaa farsamayaqaankii raadiyowga dhisi lahaa, wuxuu islamarkiiba u hawlgalay dhismihii idaacadda, diyaarintii iyo tababarkii mutadawiciintii hawsheeda wadi lahaa.
Bulshada Gaalkacyo oo uu hormuud u ahaa Guddoomiyihii xilligaas ee gobolka Mudug, marxuum Cabdiraxmaan Cali Bixii, ayaa kaalin weyn ka qaatay suurtagalinta dhismaha idaacadda; bulshadu waxay ku deeqday goobtii raadiyowga laga dhisi lahaa (laba qol oo ka mid ah dhismaha saldhigga Gaalkacyo); dhaqaalihii lagu dayactiray labadaas qol oo si ba’an u dayacnaa; kuraastii iyo miisaskii qolalkaas la dhigi lahaa; shaqaale mutadawiciin ah; sugidda ammaanka raadiyowga; siinkii (tower) ay idaacaddu isticmaali lahayd; shidaalka dab-dhaliyaha idaaacadda oo ay ballan qaadeen ganacsatada deegaanka; Marxuum Cabdiraxmaan Cali Biixi ayaa isaguna raadiyowga ugu deeqay dab-dhaliye noociisu yahay Lister Bitter 9KVA, 2 biston. Xilligaas matoor kaleba Gaalkacyo ma oollin.
FURITAANKII RAADIYAHA GAALKACYO…
18kii Ogoosto, 1993kii ayaa si rasmi ah loo furay raadiyaha Gaalkacyo. Munaasad lagu maamuusayey furitaanka raadiyowga, waxaa kasoo qaybgalay islamarkaana ka hadlay Md. Cabdullaahi Yuusuf oo xilligaas ahaa guddoomiyaha guddiga xaaladda degdegga ah ee jabhaddii SSDF, Cali Ismaaciil Cabdi-giir oo isaguna ahaa guddoomiyaha jabhaddii SNDU, iyo wakiil ka socday jabhadda USC ee uu guddoomiyaha ka ahaa Gen. Maxamed Faarax Caydiid. Sidoo kale, waxaa munaasabaddaas goobjoog ka ahaa waxgaradka iyo odayaasha deegaanka. Munaasabaddan waxay lahayd laba ujeeddo; Furitaanka idaacadda iyo wareejinta idaacadda oo nimankii keenay ay ku wareejinayeen gacanta bulshada.
Furitaanka Raadiyaha Gaalkacyo wuxuu kusoo beegmay xilligii loogu baahi badnaa. Waxaa raadiyaha la furay laba bilood kaddib markii ay beelaha Soomaaliyeed ee gobolkaas wada deggan kala qorteen heshiiskii nabadda ee 4tii Juun, 1993. Heshiiskaas wuxuu dhigayey in nabad lagu wada noolaado, meelna looga soo wada jeesto tallaabo kasta oo carqalad ku noqon karta nabadda iyo xasilloonida deegaankaas.
Inkastoo uu heshiiskaas ku yimid rabitaanka iyo taageerada beelaha deegaankaas, misana ma sahlanayn in jabhadihii heshiiskaas wada galay ay fuliyaan heshiiskaas nabadeed oo durba yeeshay cadaw aad u fara badan, sababtoo ah jabhadahaasi ma aysan lahayn awood dhaqaale iyo mid ciidan oo u suurtagalin karey in ugu yaraan ay deegaankaas ka abuuraan hay’ado sharci-fulineed oo qaabilsan dib-usoo-celinta iyo ilaalinta nidaamka iyo kala dambaynta. Gorfeeyayaasha arrimaha gobolka Mudug ayaa aaminsan in raadiyaha Gaalkacyo oo adeegsanaya hirarka gaagaaban uu buuxiyey kaalintaas iyada ah.
Iyadoo loo marayo dhabbaha wacyigelinta ee dhinacyada diinta, barnaamijyada, wararka, iyo hal-abuurka suugaanta, raadiyaha Gaalkacyo wuxuu suurtagaliyey in ay si sahlan isugu soo dhowaadaan beelihii ay dirirtu kala geysay, iyadoo dhinaca kalena uu jidbixiyeen u noqday abuurmidda jawi nabadeed oo ku dhiirrigaliyey dad badan oo ka shakisnaa heshiiskaas in ay si dhaqso ah dib ugu soo noqdaan guryahoodii. Raadiyaha Gaalkacyo wuxuu kaloo diiradda saaray ka-digista iyo far-ku-fiiqidda tallaabo kasta oo turunturro ku noqon kartey wada-noolaanshaha beelihii nabadda ku heshiiyey.
Ugu dambayntii, xeeldheerayaasha iyo gorfeeyayaasha arrimaha gobolka Mudug waxay isku raacsan yihiin in raadiyaha Gaalkacyo la’aantiis uu heshiiskaas ku turunturroon lahaa shirqoollo fara badan oo gudaha iyo dibeddaba laga soo maleegayey, si loo fashiliyo heshiiskaas nabadeed oo noqday heshiiskii ugu horreeyey oo ay beelo Soomaaliyeed wada gaareen iyadoo aysan u kala dabqaadin, maalgelin, ama ku kala dhex jirin shaqsiyaad ama hay’ado shisheeye.
Cabdikariin Nuur iyo Sam Voron intaas kagama aysan harin baritaaridda raadiyaha Gaalkacyo, waxayna tan iyo xilligaas illaa iyo haatan la daba joogaan taageero joogto ah oo u badan xagga qalabka iyo farsamada. Labadooduba dhowr jeer bay Gaalkacyo dib ugu soo laabteen, si ay u ebyaan hawlo xagga farsamada iyo qalabka ah. Jaaliyadaha dibedda ee Waqooyi-bari Soomaaliya (Puntland) ayaa iyaguna dhankooda ka muujiyey dadaallo aan lasoo koobi karin oo dhammaantood ku aaddanaa kor-u-qaadidda tirada iyo tayada qalabka iyo barnaamijyada idaacadda.
Waxqabadka Cabdikariin Nuur Maxamuud “Cirfe” kuma koobna raadiyaha Gaalkacyo oo keliya, wuxuuse horseed ka ahaa shirkaddii “Ausoma” oo ahayd shirkaddii ugu horreysay oo suurtagalisay in dadweynaha magaalooyinka Gaalkacyo iyo Garoowe ay helaan adeeg talefoon iyo mid internet. Sidoo kale, Cabdikariin Nuur wuxuu xilligan xubin firfircoon ka yahay shirkadda biyaha Gaalkacyo iyo guddiga dhismaha waddada Wadaagsin ee isku xirta Gaalkacyo iyo xeebta Garacad ee degmada Jarriiban, iyadoo ay intaas u dheer tahay ku-gacansiinta odayaasha iyo waxgaradka deegaanka xagga xallinta qilaafaadyada, kuwaasoo haddii aan la xakamayn u xuubsiiban kara dhibaatooyin sababa waxyeello naf iyo maalba leh.
Cabdikariin Nuur wuxuu haatan si rasmi ah ugu soo guuray magaalada Gaalkacyo, si uu ugu gacan bannaanaado dadaalka weyn ee uu ugu jiro horumarinta iyo dhismaha dalka iyo dadka Puntland, gaar ahaan gobolka Mudug.
Ugu dambayntii, inkastoo aysan shaki ku jirin in guud ahaan reer Puntland ay abaal weyn u hayaan Cabdikariin Nuur iyo Sam Voron oo gurmad la taaban karo u fidiyey xilligii ay ugu baahi badnaayeen, misana waxaan weli jirin falcelin rasmi ah oo la taaban karo oo laga bixiyey abaalgashigaas isaga ah. Sida ay qabaan gorfeeyayaasha arrimaha horumarinta Puntland, waxaa lagama maarmaan ah in hoggaanka sare ee Puntland, oo wakiil ka ah reer Puntland, uu si rasmi ah uga falceliyo abaalkii ay labadaas nin gashadeen reer Puntland, gaar ahaan Cabdikariin Nuur “Cirfe” oo tan iyo 1992kii illaa iyo haatan u taagan horumarinta dalkiisa iyo dadkiisa. Waxaa hubaal ah in falcelinta caynkaas ah ay dhiirrigalin u noqon lahayn shaqsi kasta oo u guntan dhismaha dalkiisa iyo dadkiisa, dhanka kalena waxay beenin lahayn hal-ku-dhegga beryahan caanbaxay ee ah “Puntland waa laga shaqaystaa ee looma shaqeeyo”. Si kastaba arrintu ha ahaatee, waxaa la hubaa in kala soocid la’aanta qofka Puntland u shaqeeya iyo kan ka shaqaysta ay dhabbaha u xaari doonto in la caadeysto hab-dhaqan xun oo ragaadin doona dhismaha iyo horumarinta dalka iyo dadka Puntland…abaalse nin galaa badan, nin gudaase yar…
Ujeeddada Qoraalkan waxay ahayd oo keliya in lasoo bandhigo sooyaalkii taariikheed ee raadiyaha Gaalkacyo tan iyo qabanqaabadiisii hore illaa iyo maalintii sida rasmiga ah loo furay.
Afeef: Aragtida qoraalka waxaa leh qoraag aku saxiixan